နှာခေါင်းစည်း မတပ်လို့ ဒဏ်ရိုက်ခြင်း နောက်ကွယ်က ရိုက်စားခွင် အချို့ | CeleTrend
နှာခေါင်းစည်း မတပ်လို့ ဒဏ်ရိုက်ခြင်း နောက်ကွယ်က ရိုက်စားခွင် အချို့
နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်စေချင်လို့ အရေးယူတာလား? ရိုက်စားလုပ်နေကြတာလား
ယခုတလော မြို့နယ် အတော်များများမှာ mask မတပ်ရင် ဒဏ်ငွေရိုက်ပြီး အရေးယူတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ခပ်စိတ်စိတ် ကြားလာရပါတယ်။ လူတွေ mask တပ်အောင် အာဏာပိုင်တွေက အမိန့်နဲ့ အရေးယူလာတဲ့ သဘောပါ။ ဒီကာလကြီးထဲမှာတော့ အပြင်ထွက်ရင် mask က မဖြစ်မနေ တပ်ရမှာပါ။ အရေးယူတဲ့ လူကလည်း မျက်စိလျင်လျင်နဲ့ သေသေချာချာ အရေးယူ ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အရေးယူတဲ့ နေရာမှာ ဆင်ခြင်ဥာဏ်နဲ့ အရေးယူသင့်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အကို ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်လို ကားမောင်းလာတဲ့ လူအတော်များများ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကိုပဲ သေချာ နားမလည် တာလား၊ ရိုက်စား လုပ်တာလား ဆိုတာကတော့ ဖမ်းတဲ့သူ ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ်။ တာဝန်ရှိသူများလည်း အောက်ခြေ မြေပြင်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သိကြပြီး ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဒီကနေ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအကိုရဲ့ ပို့စ်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်-
“လှေနံဓါးထစ် နဲ့ Mask Campaignကို အရောင်ဆိုးနေတဲ့သူတွေ – ကားထဲမှန်ပိတ်စီးတယ် သူတို့ဆင်းလာပါပြောချိန် mask တပ်ပြီး ကျနော် အောက်ဆင်းရင် mask တပ်​ကြောင်း ပြောပြတယ်။ ကျူပ်ကိုယ်တိုင်က Volunteer ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြတယ်။မရဘူး တိုင်းက အမိန့် Mask ၂ခု ၅၀၀၀ တဲ့ဗျာ။ သူတို့ကြည့်တော့ မေးစေ့ mask တပ်လေးတွေ။ ကျုပ်တို့ Mask Campaign ထောက်ခံသူတွေတောင် ငြိုငြင်ရင် ပြည်သူက မကြည်ဖြူတာ ဘာဆန်းလဲ။သည်လိုရိုက်စားတွေကြောင့်ပေါ့ Mask Campaign ရုပ်ဆိုးနေရတယ်။ ထွေအုပ်တွေကို သေချာသင်ပေးကြပါ လုပ်လိုက်ရင် ပေါက်ကရ တွေချည်းဘဲ။ လူကြီးတွေ သိအောင်ပြောပြကြပါဦး။”
နှာခေါငျးစညျး (Mask) တပျစခေငျြလို့ အရေးယူတာလား? ရိုကျစားလုပျနကွေတာလား
ယခုတလော မွို့နယျ အတျောမြားမြားမှာ mask မတပျရငျ ဒဏျငှရေိုကျပွီး အရေးယူတဲ့ ဖွဈရပျတှေ ခပျစိတျစိတျ ကွားလာရပါတယျ။ လူတှေ mask တပျအောငျ အာဏာပိုငျတှကေ အမိနျ့နဲ့ အရေးယူလာတဲ့ သဘောပါ။ ဒီကာလကွီးထဲမှာတော့ အပွငျထှကျရငျ mask က မဖွဈမနေ တပျရမှာပါ။ အရေးယူတဲ့ လူကလညျး မကျြစိလငျြလငျြနဲ့ သသေခြောခြာ အရေးယူ ရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ အရေးယူတဲ့ နရောမှာ ဆငျခွငျဉာဏျနဲ့ အရေးယူသငျ့ပါတယျ။
အောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ စတေနာ့ဝနျထမျး အကို ကွုံခဲ့ရတဲ့ ဖွဈစဉျလို ကားမောငျးလာတဲ့ လူအတျောမြားမြား ဖွဈနကွေတယျလို့ ကွားရပါတယျ။ ထုတျပွနျထားတဲ့ စညျးကမျးကိုပဲ သခြော နားမလညျ တာလား၊ ရိုကျစား လုပျတာလား ဆိုတာကတော့ ဖမျးတဲ့သူ ကိုယျတိုငျပဲ သိပါလိမျ့မယျ။ တာဝနျရှိသူမြားလညျး အောကျခွေ မွပွေငျမှာ ဘယျလို ဖွဈနလေဲဆိုတာကို သိကွပွီး ပွနျလညျ ပွငျဆငျနိုငျကွပါစလေို့ ဒီကနေ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။ စတေနာ့ဝနျထမျးအကိုရဲ့ ပို့ဈကို အောကျမှာ ဖျောပွလိုကျပါတယျ-
“လှနေံဓါးထဈ နဲ့ Mask Campaignကို အရောငျဆိုးနတေဲ့သူတှေ – ကားထဲမှနျပိတျစီးတယျ သူတို့ဆငျးလာပါပွောခြိနျ mask တပျပွီး ကနြျော အောကျဆငျးရငျ mask တပျကွောငျး ပွောပွတယျ။ ကြူပျကိုယျတိုငျက Volunteer ဖွဈကွောငျး ရှငျးပွတယျ။မရဘူး တိုငျးက အမိနျ့ Mask ၂ခု ၅၀၀၀ တဲ့ဗြာ။ သူတို့ကွညျ့တော့ မေးစေ့ mask တပျလေးတှေ။ ကြုပျတို့ Mask Campaign ထောကျခံသူတှတေောငျ ငွိုငွငျရငျ ပွညျသူက မကွညျဖွူတာ ဘာဆနျးလဲ။သညျလိုရိုကျစားတှကွေောငျ့ပေါ့ Mask Campaign ရုပျဆိုးနရေတယျ။ ထှအေုပျတှကေို သခြောသငျပေးကွပါ လုပျလိုကျရငျ ပေါကျကရ တှခေညျြးဘဲ။ လူကွီးတှေ သိအောငျပွောပွကွပါဦး။”
သားတွေက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ပို့ပေးတဲ့ငွေလေးနဲ့ တောင့်ခံနေရတယ်လို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဂွမ်းပုံကြီး